Ciidamada kumaandooska Danab oo Al-Shabaab kala Wareegay degmada. – Kismaayo24 News Agency
by admin 6th August 2019 033
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Xoogga dalka Soomaaliya ayaa goor dhow si buuxda ula wareegay degmada Ow-dheegle ee Gobalka Shabeellaha Hoose oo ay gacanta ku hayeen muddo sanado ah kooxda Al-Shabaab sida ay goor dhow shaacisay dowlada Somalia.
Wakaalada Wararka u faafisa dowlada Somalia ee SONNA ayaa ku warantay in Ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegtay in ciidamadu ay isku fidiyeen dhammaan qaybaha kala duwan ee degmadaan xaaladuna ay tahay mid degan.
Taliyaha Ciidanka Lugta Gen. Odowaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ciidanka xoogga wali ay sii baacsanayaan xoogagii Al-shabaab ee ay kala wareegeen Aw-dheegle, ayna ku sii wajahan yihiin deegaano kale oo wali ay joogaan Al-shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada dowlada ay si nabadgelyo kula wareegeen degmada Aw-dheegle ka dib markii xoogaga Al-shabaab ay isaga baxeen markii ay ka war heleen duulaanka ku soo wajahan.
Degmada Aw-dheegle ayaa ka mid aheyd degaanadii ay Al-Shabaab dib ula wareegeen, ka dib howlgaladii Sanadihii 2012 iyo 2013 ciidamada xoogga dalka kula wareegeen inta badan gobolka Sh/Hoose.
Ciidamada kumandoska Somalia iyo kuwa Maraykanka ayaa sanadkii 2016 weerar xoog leh ku qabsaday degmada Aw-dheegle balse ayaa Al-shabaab ayaa muddo yar ka dib degmadaas dib u qabsaday, iyagoo maamulayey ilaa maanta oo mar kale gacantooda laga bixiyey.
Dowlada dalka Kenya oo shaacisay inay difaaceyso Axmed Madoobe.
admin 21st August 2015 27th August 2015
Musharax Axmed Cabdisalan oo laga taageeray Wadanka Maraykanka.